Twitter enwurula ọkụ maka okwu ndị 'Yahoo' - BBC News Ìgbò
Twitter enwurula ọkụ maka okwu ndị 'Yahoo'
Nkenke aha onyonyo EFCC bụ ngalaba gọọmenti etiti na-enyocha onye ọbụla na-eme mpụ na mmerụaka na Naịjirịa
Akụkọ na EFCC nwụchiri ndị Yahoo 12, ebulitela ndọrịtaụka maka ndị a ji aghụghọ anara mmadụ ego ya na soshal midia.
Ụbọchị Satọde, aka kparala ụmụnwoke 12 ji aghụghọ anara mmadụ ego ha a na-akpọ 'Yahoo-Yahoo' n'ụlọ oriri na nkwari dị na Legọs.
Ndị ụlọọrụ EFCC natakwara ha ụgbọala iri oge ha wakporo ha dịka ụfọdụ n'ime ndị a hapụrụ ụgbọala iri ha "na-acha n'anya" gbalaga.
A nwuchiela 'ụmụnwoke yahoo' 12 na club dị na Ikoyi
EFCC anwuchiela Babachir Lawal
EFCC anwụchiela Sinetọ Nwaoboshi, Jang
Mana dịka ọtụtụ ndị Naijiria na-akatọ agwa ndị Yahoo-Yahoo ma kwuo na ọ bụ ifee ego kpatara 'Yahoo-Yahoo' na mmerụaka ji arị elu na Naijiria, ebe ụfọdụ kwuru na ọ bụ ọnọdụ Naijiria butere ajọ agwa a.
Otu onye kpọrọ onwe ya Ohimai Godwin Amaize, kwuru na Twitter na "Ebe ọ bụrụhaala na ịda ogbenye dịka mpụ na Naịjirịa, ebe ọ bụ na a na-akparị mmadụ maka na ọ bụ onye ogbenye, ma na akatọ ya, "O buru na inweghị ego, ga-zo ihu gi, anyị na akpa ọchị ikwu na anyị chọrọ ikwụsị Yahoo-Yahoo na mmerụka!"
Onye ọzọ nyere aha ya dịka Mandem, tụrụ arịrị na ugboro ugboro ya na ndị mba ofesi na-akpa nkata azụmahịa ma "ngwangwa ha chọpụtara na m bụ onye Naijiria, ha agbanyụọ ọkụ n'ihi ndị a a kpọrọ Yahoo-Yahoo."
Demola kwuru," A zụrụ m laptọp, gị azụọ. A zụrụ m modem, gị azụọ, E goro m internet, gị egoo. M'abụrụ onye ji ihe ndịa na emepụta ihe, gị nwa e jiri nke gị ghọọ nwoke Yahoo. Ihụla na ọ bụghị Naijiria butere ya. Ọ bụ ihe ị chọrọ ka ị hụrụ. I bụ onye ohi."
Mana ihe kara mee ka Twitter nwuru ọkụ bụ okwu Noble Igwe kwuru na Twitter ebe ọ katọrọ ndị Yahoo ma kwuo na ọtụtụ ụlọ oriri dị na Victoria Island bụ ebe ndị Yahoo na-agbakọ.
Okwu ya kpara otu onye a kpọrọ Oyemyyke iwe nke mere o ji mee ihe nkiri na-akpọrị Noble Igwe.
Lee ihe ndị ọzọ kwuru maka okwu a kpụ n'ọnụ:
Miss poetic kwuru na ya ghọtara na ndị Yahoo bụ ndị ohi ndị a chọghị ịgba mbọ, kama ha na-agbawa ndị mmadụ aka ma na-emebi aha ndị Naijiria na-akwụwa aka ha ọtọ, mana ya aghọtaghị ndị na adọnyere ha ukwu sị na ọ bụ ihe kpatara ha ji etinye aka n'ihe ọjọọ a.
Dịka ụfọdụ na-akatọ ndị oji aghụghọ a nara mmadụ ego ya, ụfọdụ na-ekwuchitere ha sị na ọ bụ ọnọdụ mere azụ mgbakọ.
Good Civillan Emose kwuru na ọ bụ ndị ajọ ndị ndu kwanyere ha n'ọnọdụ ahụ.
Ụfọdụ kwuru na ndị Yahoo ji ego ha nwetara atọ mkpa.
Agwọ loro ego: EFCC anwụchiela ndị ụlọọrụ Jamb
Ụlọọrụ EFCC awakpola Club 57 dị na Ikoyi